James Rodriguez oo ay u badan tahay inuu ka tago Bayern Munich… (Kooxdee ku sii jeedaa?) – Gool FM
(Munich) 26 Abriil 2018. Ciyaaryahan James Rodriguez ayaa la soo sheegayaa inay u badan tahay inuu ka tago naadiga Bayern Munich ee dalka Jarmalka, waxaana la sii saadaalinayaa kooxda uu ku sii jeedo.
Jariiradda Marca ee ka soo baxda dalka Spain ayaa warinaysa in James Rodriguez aysan u badnayn inuu baaqi ku sii ahaan doono naadiga Bayern Munich marka uu dhammaysto heshiiskiisa amaahda ah dhammaadka xagaagan.
Xiddiga xulka qaranka Colombia ayaan ku raaxaysanaynin ka hoos ciyaaridda macallin Niko Kovac, waxaana uu sii joogi karaa kaliya marka ay Bayern Munich bedesho tababarahan.
Kooxda ka dhisan Waddanka Jarmalka ee Bayern Munich ayaan doonayn inay laacibkan ku iibsato lacagta lagu burburin karo qandaraaskiisa ee ah 42 milyan oo gini oo u dhiganta 54 milyan oo dollar.
Yeelkeede, dib ugu soo laabashada Tababare Zinedine Zidane ee kooxda Real Madrid ayaa James uu dib ugu soo laaban karaa Los BLancos, halka uu sii jeedo James ayaana lagu sheegay inay tahay caasimadda Spain ee Madrid si uu dib ugu laabto kooxda milkiyaddiisa leh ee Real Madrid.
Kooxda Manchester United oo doonaysa inay la soo wareegto Weeraryahan ka dheela horyaalka Premier League